Degmadda Vellinge oo sharuudo adag ku soo rogtay ajaanibta degmadaasi ku nool | Somaliska
Shaqada & Ganacsiga / Siyaasada
Xisbigga Moderat-ka ee degmaddaaasi Vellinge isky af gartay ka dib hindise ka yimid dhankooda kaas oo ah ajaaniba lugu soo rogay sharuudo dhaqaalaha looga gooyn karo haddii aaneey sharudiihii laga doonayey ka soo bixin.
“Waxaa jira masuuliyad badan oo saaran degmada lagana fileyo inay ka soo dhalaasho, sidaa si la mid ah ayaannu u dooneynaa in aannu caddeeyno waajibaadka shakhsiga saaran iyo sidii uu si firfircoon uga qayb qaadan lahaa howlaha si uu bulshada ula qabsado” ayey tiri, Carina Wutzler oo u warameeysay muuq baahiyaha SVT Skåne islamarkaana ka mid ah xil dhibaannada degmada Vellinge ee wakiilka ka ah xisbiga Moderat-ka.
Sharuudaha ay degmadda dooneeysa ayaa waxaa ka mid ah is dhex galka, kuwaas oo ajaanibta cusubi laga doonayo e ineey muujiyaan tallaabo ay horey ugu qaadeen barashada afka iswiidhish-ka SFI iyo ineey ka gudbaan aqoonta arrimaha bulshada ama waxa loo yaqaano samhällsorientering. Sharuudahan ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah in shakhsiga sharuudahan la dul dhigay uu hufnaani ku jirto uga qayb qaato howlaha sahlaya sidii lagu geli lahaa suuqa shaqada iwm.
Sharuudahan ahaa kuwo lugu soo rogay dhamaan ajaanibta ku cusub dalka ee degmadaasi ku dhaqan. Maamulka degmadda waxaa uu go,aansaday in ciddii sharuudahaasi ka soo dhalaali weeyso laga goosan doono dhaqaalaha. Sharuudahan go’aanka ah ee lugu soo rogay ajaanibta degmadaasi ayaa la filayaa inuu hirgali doono bisha janaayo ee sanadka 2018-ka.